Leica Airborne CityMapper - xalal xiiso leh oo loogu talagalay khariidadaha magaalooyinka - Geofumed
Disember, 2018 Engineering, topografia
Waxaa macquul ah in aanan waligeen arki doonin SmartCity dhab ah, oo leh aragti muhiim ah. Waxaa suurtagal ah in ay jiraan baahiyo aasaasi ah oo ku saabsan mowduucyadeena intii aan ka fekereyno internetka. Xitaa, waxa soo saarayaasha wax soo saarka ah ay sameeyaan cidna way weydiisatay. Xaqiiqdu waxay tahay in jinsiyaddu ay isbedel ku sameyso isbeddel ku yimaada sida ay warshadu u shaqeyn doonto mustaqbalka, halkaasna ma jirto qaab kale oo lagu tijaabiyo meesha ay wax ku socdaan.
Inkasta oo aan diiradda on xalka Leica dhamaadka this article - topic in aan lahaa waqti ay ku hadlaan oo ay la socdaan saxaarad Paisa la Laura ka Switzerland iyo Pedro ee Brazil, oo hoos Congress of Inter-American Network Cadastral Diiwaanka Bogotá - waa arrin xiiso leh in la arko in kaliya kiisaska qabashada dhabta ah, tartamayaasha xulafada ah ay qaataan dadaalkooda. Dhanka kale, ESRI / AutoDesk iyadoo la raadinayo isdhexgalka deegaanka BIM / GIS ee xalka CityEngine, Bentley / Siemens oo leh Twin CityPlanner. Xaaladda Hexagon oo leh qalab Leica CityMapper. Kasta wuxuu leeyahay sifooyin kala duwan, laakiin dhan oo iyaga ka mid ah waa in dagaalka si ay u dhexgalaan endpoint ah run ahaantii socodka laga bilaabo qabsaday xogta, Tusaale, design, dhismaha, hawlgalka iyo wareegga nolosha ka yar a tusmada Heerka Hubka BIM ee 3.
qulqulka Kuwan waxaa laga soo soocay sanado badan, laakiin waa mid sii adkaaneysa in la kala saaro ay isa-soociddiisa, sababtoo ah kaliya in aad raadsato hab SmartCity ah, fikirka ah in weli waa ka yar dhismaha, laakiin kuwaas oo geomatics iyo injineerada waa in aan iska eegto, sababtoo ah waxay ka dhigan tahay xog, habraacyo iyo tiknoolajiyad ayaa dhici doona tobanka sano ee soo socda.
Abaalmarinta Kacaanka 4aad (4IR), SmartCities iyo Internet of Things
Saldhigga sigaarkan qayb ka mid ah macnaha guud. Sidee naqshad waxtar leh u bixisaa fududaynta habka hawlaha bani'aadamnimada loo qabto. Mashiinka dhuxusha wuxuu ahaa isku day muhiim ah in la dedejiyo geeddi-socodka, ka dibna wuxuu sii waday koritaanka illaa helitaanka korontada, kadibna abuurista kombuyuutar sida qalab lagama-maarmaan ah marka shaqeynayo; seddexda arrimahaan waxay la xiriiraan saddexda isbeddel-warshadeed ee taariikhda la soo dhaafay.
Currently, dunida waxaa soo food saartay kacaanka afaraad ee da'da digital ku salaysan u weeyn in technology waa la awoodi waayo, qof kasta oo loo isticmaalo si ay uga faa'iideystaan ​​bulshada; sidaas darteed awood u yeeshay in uu isticmaalo mareegaha baahinta macluumaadka (Cloud / BigData), sirdoonka asalka ah (AI), biotechnology iyo dareemayaasha si ay u helaan macluumaad degdeg ah oo ku saabsan dhacdooyinka, kormeerka iyo goobta ilaha.
Waxaan ku jirnaa daqiiqad, kaas oo dhammaan xirfadlayaasha, laga bilaabo wax kasta oo khibradooda ay u isticmaali karaan teknoolojiyada iyagoo isticmaalaya xulafadooda si kor loogu qaado horumarinta deegaankooda. Horumarka iyo guulaha farsamada ayaa abuuray isbeddel muhiim ah ee goobaha - taas oo ah kiisaska kaabayaasha - haddana ma aha wax xeel dheer, laakiin dalabku waa mid deggan. Dhammaan horumarintaas, waxay u hoggaansamaan inay siiyaan taleefannada loogu yeero SmartCities; kuwaas oo ah udubdhexaad u baahan in la isku daro xiriirka u dhexeeya ilaha aadanaha, teknoolajiyada, maamulka macluumaadka, iyo u-habaynta deegaanka.
-Waxaan fahmay, sigaar ku dhajiyay qoob-ka-soo-saarka filimka filimka ka-dambeeya. Hase yeeshee, taasi waa mawduuc ku taala arena halkaas oo geolocation ay door muhiim ah ka ciyaaraan.
Tani isdhexgalka khayraadka iyo qalab, u ogolaan quruumaha iyo dawladaha fiican go'aan-qaadasho, ay awoodaan in ay tayadoodii ay dhaqaalaha iyo jidka nolosha, mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha ka jira meel loo isticmaali doonaa si ay u sameeyaan qayb ka mid ah taxane ah oo warbixin aan la koobi karayn, waxa loo yaqaan IoT (Internet of Things).
tusaalooyin xiiso Waxaan si shaqsi ah arkay SmartCity waa Singapore, taas oo uu ku guulaystay shahaadada sida mid ka mid ah magaalooyinka ugu xaragada badan ee dunida, lagu gartaa isagoo meelaha dareen leh, oo leh dadaal si ay u hirgeliyaan iyo joogteynta joogta ah in dabagal iyo la socodka guud ahaan kala duwan dareemayaasha, marka lagu daro jimicsi loogu talagalay mashruuc si joogta ah u martigeliya xogta la helay, oo aad adigu go'aan ka gaari karto waxa ka jira, sii wadida diirada saara cimilada deegaanka iyo dhismaha.
Aragtida IoT ma aha oo kaliya oo ku saabsan hirgelinta dareemayaal wax, ama ay u ilaaliyaan a collection of firfircoon oo ka walba xogta qalab, laakiin sidoo kale khayraadka iyo falalka diiradda on abuuritaanka SmartCities ku go'doonsan, waxaa isku xidhan oo la xidhiidha geedi socodka waraaqo, design, naqshadaha - injineernimada - dhismaha AEC (ay gaabinta in English), macluumaadka dhismaha iyo saxba (BIM) iyo maamulka habab macluumaadka sida GIS, xidhiidhada, kuwaas waxa ka koobnaan dhibaatada dhabta ah in la aasaaso magaalooyin caqli badan.
Ka dib markii baahi cad oo isku mid ah habab sida AEC + BIM + GIS, sida xarunta maamulka macluumaadka, waxaa ku hamiyo inuu is-dhexgalka leh magaalada 3D Qaabaynta ah. Sidaa waallidii u fududayn iyo dardar Qaabaynta ku dhow in ay qabsadaan macluumaad sida aqoonsiga ee ku wajahan bini'aadamka, diiwaanada sida casriga digital xagga dhidibka of maamulka hawlgalka ee la marayo sida wareegga nolosha ka mid ah alaabada (PLM).
Tusaalaha Leica Airborne CityMapper
adeegsiga tiknolojiyada 3D caawin yareeyo waqtiga iyo kharashka of xog ururinta ee duurka jooga, iyo in kastoo hadda qalab sahan yihiin kuwa qabsiga isagoo iyo cadilidooda si loo soo qabto Qaabaynta xogta, waxaa xiiso leh in la lixgeesle by Leica Nidaamka Geeseedka waxaa loo soo bandhigay qaab kale, abuurista dareeraha oo soo xiraya noocyo kala duwan oo xog ah oo ku jira hab isdabamarin iyo isdhex galka, Leica Airborne CityMapper.
suuqa waxay bixisaa dareemayaal ku haboon drones image qabtay, infrared, accelerometers, mitir qoyaan, dareemayaal waddooyinka si loo xakameeyo socodka gaadiidka, akhristayaasha of Qurub in jawiga iyo kuwa kale qaato macluumaadka meesha bannaan ee jidhadhka gudahood. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa in ay Leica Geosystems 'ballanqaadka, ee horumarinta taariikh ahaan horumariye taariikheed ee teknoolajiyada khaaska ah ee aagga xogta fog ee xogta iyo ka shaqaynta, waxay qaadataa tallaabo muhiim ah iyada oo la bilaabayo Airborne Leica CityMapper, taas oo si macquul ah u shaqeeyso sida dareeraha hawada ee dareeraha leh leh qaababka sida:
Sawir farsamo oo laba jibbaar ah oo leh xalka xalka 80 MP iyo Nadir.
Afar kamarado farsamo oo leh jihada duulimaadka, qiyaasta mini RGB ee 80 MP iyo xagal wareeg ah oo 45º ah oo lagu sawirayo sawirro yar yar.
Nidaamka lidar, marxaladaha ku celcelinta ee 700 Hzs, scan taranka qaababka kala duwan, heerka 40 ee aragga aragtida, falanqaynta mawjadaha iyo sifooyinka waqtiga dhabta ah.
Waxaa la abuuray shaqo ee ka jira magaalooyinka khariidadda iyo magaalooyinka iyaga iyo saxba, in uu yahay, u socday ka baxsan oo kaliya geolocation ee xubno, waxaad samayn kartaa orthophotos, daruuraha dhibic, dem oo lagu daydo 3D; si ay Hexagon ula socoto dareenkan doonaya in ay leedahay qalab muhiim ah horumarinta SmartCities ee line; caawinta fahamka shaqada adag ee jawiga iyo jihada magaalooyinka. Its qaab-dhismeedka kakan ka mid ah qabsaday xaddi weyn oo xogta in diyaarad hal, taas ma aysan dhicin la satalayt caadiga fog Satlaytaka iyo dhawrid Earth, GNSS, ama naadi.
In kastoo, jiritaanka goobo bannaan oo bixiya macluumaad kale oo dhamaystiran looma diidi doono; Iyada oo dareenkan cusub, ma aha mid lagama maarmaan in la kala doorto alaabooyinka, sida sawir ama daruur darajo, sababtoo ah dhammaan macluumaadka horeyba waxay ahaan lahaayeen hal duulimaad.
Dareemaha hawada ayaa si dhakhso ah iyo si wax ku ool leh uga soo jiidan kara magaalooyinka ugu yar, magaalooyinka leh cufnaanta magaalooyinka ugu sarreeya, ka caawinta ka fogaanshaha kharashaadka maaliyadeed ee qorshayaasha duulimaadka ama qorshooyinka shaqada
Si loo hirgeliyo xaddiga macluumaadka soo saara dareenkan, Leica waxay bixisaa nidaam, iyaga oo u yeeray inay yihiin dhexdhexaad shaqo isku mid ah, taas oo ka kooban hawlaha laga soo qaatay, qabashada xogta iyo muuqaalka xogta, iyada oo loo marayo software khaas ah oo la yiraahdo HxGN.
Waxay raadsadeen in software-kan waa mid sahlan oo la taaban karo, iyada oo loo marayo talaabooyin gaar ah oo tilmaamaya inuu isticmaalo alaabta uu u baahan yahay. Waxay ku lug leedahay hawsha shaqada si markaa alaabooyinka ka soo baxa qabashada lagu soo saaro sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah; badeecad kasta waxay leedahay badhan waxqabad gaar ah. Inkasta oo softwareku uu soo bandhigo interface fudud, farsamoyaqaanada ama falanqeeyayaasha oo khibrad u leh in ay qabtaan xogta noocan ah ayaa sidoo kale loo baahan yahay.
Waa suurtogal, sida hadba baahida, in lagu daro liisamo badan oo ku habboon xogta la qabtay. HxGN, waxaa loogu talagalay in lagu dhajiyo habka xogta badan ee CityMapper, iyada oo loo marayo saddexdan qaybood oo waaweyn: RealWorld, RealCity iyo RealTerrain.
RealWorld: waxaa si gaar ah loogu talagalay mashaariicda ku lug leh sawirada balaadhan, oo ay ku jiraan moduleka koronto-dhaliyaha - qaabka muraayadaha, macruufka daruuriga.
RealTerrain: waa qaabka farsameed ee xogta Lidar loogu talagalay meelaha ballaaran iyo isdabajoogga dhismaha ee sare. Waxaa ka mid ah moduleka korontada dhaliya ee korontada dhaliya, diiwaanka iyo macluumaadka daruuraha, dariiqa baabuurta, iyo metric data.
RealCity: waa habka taageerada loogu talagalay SmartCities, taas oo u oggolaanaysa abuuritaanka 3D qaabaynta qaababka la qabtay. Waxaa ka mid ah habka korantada quraarada - ortomosaics, buundada xogta daruuriga ah, qaababka magaalooyinka, khariidadda dhuxusha iyo tifaftiraha 3D.
Dhab ahaantii waa caqabad adag oo ah waxa ay Bentley Systems raadineyso, wax walboo la mid ah waxa aan ka hadli doonno waqti dambe, oo ay ku jiraan ContextCapture, CityMapper iyo kooxda Topcon. Waxaan arki doonaa sida ay wax ka qabanayaa labada Esri / AutoDesk, waxay u qaadan doontaa waqti si ay u dhexgalaan qalab lahaa wadooyinka iyaga u gaar ah sida Drone2Map, Vidiyo, Infraworks, taasoo ka dhigeysa caqabad ku ah keenidda soo saaraha qalabka la aragtida xiriirka la leh. Trimble ayaa sidoo kale xambaarsan bedelkiisa.
Imtixaanada iyo Codsiyada
Mid ka mid ah imtixaannada dareenka lagu furo ayaa waxaa fuliyay shirkadda Bluesky UK, iyadoo safar xiiso leh in sahan cirka ah, kuwaas oo loo isticmaalo in qabashada this xogta kiiska marayo Nadir iyo uugu la 3D iskaanka laser in dhowr goobood oo ay ka mid yihiin images London. Sawirka wuxuu muujinayaa ka hor iyo ka dib qabashada, iyo sidoo kale dariiqa dhibcaha ee la xidhiidha dhismayaasha ku yaala aagga. Xaqiijinta xogta marka loo eego qaababka asalka ah waxay muujinaysaa muhiimada qalabkan ee mustaqbalka magaalooyinka.
Leica waxay muujisay inuusan shaqada ku dhameynin CityMapper, maadaama ay u baahan yihiin in ay horumariyaan dhaqsaha si ay u soo saaraan oo ay dib ugu noqdaan muraayadaha waawayn ee lafaha weyn ee magaalooyinka waaweyn. Isticmaalka dareemahan ayaa leh dhowr nooc oo codsiyo ah, kuwaas oo aan ku magacaabi karno:
Kacsanaanta iyo Qorsheynta,
Jawaabta degdegta ah ee xaaladaha degdegga ah,
Kormeerka dhirta ee magaalada,
Mabaadiida gaadiidka gawaarida,
Hirgelinta teknoolajiyada sida Leica CityMaper waa lagama maarmaan waayo SmartCities, sida keliya ma aha waxay muujinaysaa meesha uu dhamaan qaybaha meesha bannaan ee, laakiin saxba ay qaab-dhismeedka, iskudhafka macluumaadkan la ahbaa ka dareemayaal kale sida heerkulka iyo huurka ee deegaanka, awood u leh inay tilmaamaan aagagga mugga magaaladu uu kordhay heerkulka ama bedelay cimilada.
Haddii ay jirto waa wax aan ma ka hortagi kartid waa in technology this awood u beddeli doonaa (mar kale) iyo fududeeyo habka aan wax u qabtaan maanta in maamulka photogrammetry warshadaha, khariidaynta, design kaabayaasha iyo hantida. Sidaa awgeed, kacaanka afaraad ma aha ilaa hadda in kastoo ay jiraan xaaladaha oo dhan si ay u noqdaan baahsan dhammaan warshadaha, laakiin u fiirso lahaa xeerka u ah mawduucyada iyo shaqada on shidma sida robotics, gudbinta, kaydinta iyo isticmaalka kale ee khayraadka dabiiciga ah, oo ay ku jiraan tamarta - In la ogaado in qabsashada sawirrada la soo saaro tamarta qoraxda, iyo lacagaha ay soo saarto dareeraha ee kiiska Lidar. Dabadeed codsiyada waxaan ku aragnaa aragtidiisa ku saabsan qaybaha laga arkay SmartCities sida xaqiiqada muuqaalka ah, jilayaasha sida waxtarka leh ee ka hortagga u nugul iyo xitaa adeegsigaan faa'iido la'aanta, laakiin dhaqaale ahaan faa'iido u leh ciyaaraha ciyaaraha.
In kasta oo aan pragmatism degdeg tiknolojiyada tabo cusub soo baxaya, bidhaamayaan eegaynaa, in kasta oo ay aqbalo by ganacsatada iyo xirfadleyda Geo-injineernimada kori doono ilaa xad in xal waa lagama maarmaan si ay u qabashada iyo habka labada Macluumaadka sida casriyeynta la xakameeyey iyo furitaanka isdhexgalka ee xalalka dhameystiran.
Fiiri in ka badan Leica CityMapper
Post Previous«Previous Doorka jototechnology ee is-beddelka caddaynta 3D
Post Next Waayo-aragnimada barashada iyo barista BIM ee ku-xirnaanshaha qiyaasta CADNext »